HIM | Health in Myanmar » What is HIV , AIDS
What is HIV , AIDS
Author: HimBur | Category: HIV Media Guide, Myanmar2 comments
အေအိုင်ဒီအက်စ် Acquired Immune Deficiency Syndrome သည် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး Human Immunodeficiency Virus ကြောင့်
သေးငယ်လှသော ဇီဝပစ္စည်းတခုဖြစ်ပြီး သတ္တဝါများအတွင်းရှိ ကလာပ်စည်းများ သို့ဝင်ကပ်ပေါင်းပြီး
ထိုကလာပ်စည်းအတိုင်း ပုံစံကူးယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုကလာပ်စည်းများက အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗွီပိုး ပုံစံတူများ ဖွဲ‹စည်းအပြီး သေဆုံးသွားသော်လည်း
အခြားကလာပ်စည်းများ၌ သွားရောက် ဝင်ကပ်ပူးရန် ထိုပုံစံတူပိုးကလာပ်စည်းများကို
တိုက်ယူသည့် ရောဂါပိုးများ ခုခံကာကွယ်ပေးသော ပဋိပစ္စည်းများ ခန္ဓွာကိုယ်မှ ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး ယင်းကို ဆယ်±ို-ကွန်ဗာရှင်းဟုခေါ်သည်။
ဝင်လာသော ရောဂါများကို ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်း
မရှိတော့ပေ။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ယခင်က တော်ရုံတန်ရုံလောက်သာဖြစ်သော၊
ပြဿနာအကြီးအကျယ် မပေးနိုင်သော ရောဂါများသည်ပင်လျှင် အလွန်
အန္တရာယ်ကြီးသည့် ရောဂါများ ဖြစ်လာတတ်သည်။
ဘယ်လို ကာကွယ်ယူလို့ ရပါသလဲ၊
တစုံတဦးနှင့် ကာမဆက်ဆံခြင်း ပြုပါက ကူးစက်နိုင်သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်မှု နှုန်း၏
၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကာမဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးစက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ သုံးပုံတပုံသည် ဖိုမ ကြားကာမဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးစက်ပျံ့ပွားခြင်း
ဖြစ်သည်။ ပြတ် သွား၊ ခြစ်မိသွားသည့် နေရာသေးသေးကလေးများမှ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ၀င်ရောက်လာ နိုင်သည်။ အက်စ် တီအိုင် ခေါ် ကာမဆက်ဆံခြင်းမှ
ကူးစက်မှုများမှာအနာများ၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် များမှဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အိတ်ခ်ျ
အိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်လာရန်အထူးအခြေ အနေတခုကို ဖန်တီးပေးလေ သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် မိုက်ကရိုဘိုက်ဒ်စ်၊ အပြုအမူဆိုင် ရာကာကွယ်နည်း -
သမားရိုးကျပညာရေး၊ သတင်းစာနယ်ဇင်း၊ လူမှုရေးဈေးကွက်လုပ်ယူခြင်း၊
ကူးစက်ပုံကူးစက်နည်း - ဆေးထိုးခြင်း
တဦးပြီးတဦး ထပ်ကာထပ်ကာ ဖလှယ်သုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကူးစက်ခံရပြီးသူ နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး
ဆေးထိုးကရိယာများ ထောက်ကူပေးခြင်း၊ လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း လက်လှမ်းမီ သမျှ
ကွင်းဆင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အပေါင်းအဖော် အချင်းချင်းအကြား
ပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဌာနများ၊ ဆေးစစ်ခြင်းနှင့်
ကုသပေးမှုများသို့လူတိုင်းလက်လှမ်းမီရရှိအောင် လုပ်ပေး ခြင်း။
ကူးစက်ပုံကူးစက်နည်း - သွေးသွင်းခြင်း
သွင်းယူမိခြင်း၊ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သောနည်းလမ်းများ သွေးလှူသူ များအား
ဇကာတင်စစ်ဆေးပြီးမှ သွေးယူခြင်း၊ ပံ့ပိုးလာသော သွေးများအား ဇကာတင်စစ် ဆေးယူ ခြင်း။
ကူးစက်ပုံကူးစက်နည်း - မိခင်မှ ရင်သွေးငယ်များသို့
မိခင်၏သားအိမ်အတွင်း သန္ဓေတည် လာသည့်ကလေးငယ်အား မီးဖွားသည့် အချိန် နှင့်
မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးချိန် တို့တွင် ကူးစက်နိုင်သည်။
မိခင်အား အင်န်တီရီထရိုဗိုင်ရယ်စ် တိုက်ကေဋ္ဌးခြင်း၊ မိခင်နို့ရည် တိုက်ကျွေးခြင်း
မပြုပဲအခြား ကျန်းမာသောနည်းများသုံး၍ ကျွေးမွေးခြင်း။
by: bluebluenight on 13th Dec 2010
LGBT Society - What is HIV , AIDS?
lunn ko says:
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျ​နော်​သိချင်​တာ​လေး​တွေရှိ​နေလို့ ​မေးပါရ​စေဆရာ. ​ကျေးဇူးပြုပြီး​ဖြေ​ပေး​စေချင်​ပါတာ်​ဆရာ..
ကျ​နော့်​မှာ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၆ လ​လောက်​က ခန္ဒာကိုယ်​မှာအဖု​တွေ​ပေါ်တယ်​ ပြီး​တောအရမ်းယားပါတယ်​ဆရာ.....ဆရာဝန်​တချို့ကိုပြကြည့်​​တော့လည်း လူတိုင်းဖြစ်​တတ်​တဲ့​ရောဂါ အရီပြား​ရောဂါလို့​ပြောပါတာ်​. ​ခေါင်း​တွေမှာလည်း​ပေါ်ပါတယ်​.​ဆေးစားရင်​လည်း​ပျောက်​ချင်​မှ​ပျောက်​မယ်​ မ​ပျောက်​ချင်​မ​ပျောက်​ဘူး..မ​ပျောက်​ရင်​​ဆေးစားရမယ်​လို့​ပြောပါတယ်​ဆရာ...အဲဒီ​နောက်​ပိုင်း ၃ လ​လောက်​မှာ ကျ​နော်​သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့ညဖက်​ ဘီယာနည်းနည်း​သောက်​ပြီးထမင်းစားတယ်​. ညဖက်​အိမ်​​ရောက်​တဲ့ချိန်​မှာ ကျ​နော်​ဖုန်းကြည့်​​နေရင်း ​ခေါင်းနည်းနည်းမူးလာတယ်​. ခဏ​နေတာနဲ့ ရင်​​ခေါင်းက ထုံးထုံးနဲ့ ၃ ချိန်း​လောက်​ဖြစ်​ပြီး​တော ​ခေါင်း​တွေလုံးဝမူးသွားတယ်​ဆရာ. ရင်​​ခေါင်းကအဲလိုဖြစ်​တာနဲ့ ရင်​​ခေါင်းကဆို့သလိုလို​အောင့်​သလိုလိုနဲ့မခံစားနိုင်​​လောက်​​အောင်​ ​ဝေဒနာတစ်​ခုခံစားရပါတယ်​ဆရာ...​နောက်​​တော့၁လနီးပါး​လောက်​ကြာ​တော အသက်​ရှူ​တွေကျပ်​တယ်​. အားမရှိဘူး. ​မောတယ်​. ဒူးဆစ်​​တွေနာလာတယ်​ ခန္ဓာကိုယ်​​တွေကိုက်​လာတယ်​. လမ်းသွားရင်​လည်း ကရိုင်​ကပါးဖြစ်​တယ်​. လယ်​​ခေါင်း​တွေဆို့လာတယ်​. ​အော့လာတယ်​..​ခေါင်းကလည်းတအားမမူး​ပေမဲ့ နည်းနည်း​တော့မူးတာပဲ..အစတုန်းကဆိုရင်​ ထမင်းစားရင်​​ခေါင်းမူးတယ်​..အန်​ချင်​​အော့ချင်​သလိုလို​တွေ့တယ်​မစားနိုင်​ဘူး...အဲဒီ​နောက်​ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်​ဟာ တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ ​ပြောပြရခက်​တဲ့နာကြင်​မှုတစ်​ခုကိုခံစားရပါတယ်​ဆရာ....ခန္ဓာ​တွေကလည်းတ​ဖြေး​ဖြေးပိန်​လာတယ်​ဆရာ....အဲဒီလက္ခဏာ​တွေ HIV ကူးစက်​ခံရတဲ့လက္ခဏာလား သို့မဟုတ်​ ကူးစက်​ခံရပြီး aids အဆင့်​သို့​ရောက်​​နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာလားဆိုတာ​လေး သိချင်​ပါတယ်​ဆရာ..ခုဆိုရင်​ရင်​​ခေါင်း​တွေလည်းတင်းပြီး အန်​ချင်​သလို​အော့ချင်​ဖြစ်​တယ်​ဆရာ. အဖု​တွေကခုမ​ပေါ်တာ ၅ ရက်​​လောက်​ရှိပါပြီဆရာ..​ဆေးစားရင်​မ​ပေါ်​ဆေးမစားရင်​​ပေါ်တယ်​ဆရာ. ခု​တောမ​ပေါ်လို့မစား​တော့ဘူး.....​ပေါ်မှပဲစားတယ်​..ပြီးရင်​ဇတ်​​ကြော​တွေလည်းအရမ်းတက်​တယ်​ဆရာ ဒီအ​ကြောင်းအရာနဲ့ပတ်​သတ်​လို့ ​ကျေးဇူးပြုပြီး ​ဖြေ​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​ဆရာ....ဒါ​တွေမဖြစ်​ခင် ဝ​ဆေးတစ်​မျိုးလည်းစားဖူးတယ်​ပာါရာ......
အတူနေပြီး ၇ ရက်အတွင်းမှာ သံသရရှိရင် ဆေးနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ထား လို့ရနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ
ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆရင် ( သို.)သေချာနေရင်